Ngo imidlalo ye-computer, akekho ukhathalela ubuwena real - uyiyeka ohlangothini qapha. Ezweni virtual njengoba uba uhlamvu okufanele ukudlala, kodwa ngesikhathi esifanayo nicela bobuntu bakhe, ukuziphatha kwakhe, ukuthi ngeke amele. Yilokho uzokwazi ukuba bakhombise phakathi imidlalo, kodwa kukhona esinye sezici kungabonwa konke ngesikhathi esisodwa - kungcono isidlaliso. Nick ingena esikhundleni igama lakho langempela, futhi bonke abadlali bayokwazi isiteketiso sakho kuyo, kunokuba ngegama. Ngakho, nalo uzokwazi ukuba ekuqaleni esithe uveze ukuthi kuyoba uhlamvu lwakho.
Nokho, hhayi wonke umuntu angakwazi beveza isidlaliso amahle original, obekungadala sigqamile, ngekhanda futhi ehambelana isihloko yomdlalo. Banikezwe imininingwane ukuzijabulisa kulesi sihloko uzofunda indlela nikhuphuke noma uzitholele izidlaliso angamaduna imidlalo. Girls kungenzeka ingasaphathwa, ngakho ukugcizelela izokwenziwa ncamashi phezu ingxenye besilisa.
Iseluleko lokuqala - njalo ukubheka lokho umdlalo uya ukudlala. Kwangathi encike kuyo eziningi. Abesilisa beveza izidlaliso akunzima ukudlala, kuthi uma le ndaba alisho yini imingcele. Nokho, ngokuvamile kuba kakhulu ngakho udinga ukufaka isiteketiso sakho esimweni ethize - ngokwesibonelo, ezweni fantasy noma yonke fantasy. Kukhona singenakwenzeka uzokwazi ukuqamba uhlamvu "Bob", ngoba ngeke angena kuwo wonke umhlaba osizungezile. Njengoba ubona, kukhethwa isidlaliso kungaba ngokuvamile neqhaza ekunqumeni, ngakho udinga ngokucophelela futhi sina kufinyelela kuleli qophelo. izidlaliso zabesilisa imidlalo ayatholakala ngezindlela eziningi ezahlukene, okuzokwenziwa elichazwa kamuva. Yiqiniso, uthome ezisobala kakhulu, okuyinto esetshenziswa iningi abadlali.
Ukudala isidlaliso sakho siqu
Akunandaba ukuthi ingabe kukhona imigoqo kanjani izobukeka isiteketiso sakho noma cha, indlela yokuqala kakhulu ukuthi une ukusebenzisa - kuyinto amehlo akho engqondo. izidlaliso zabesilisa imidlalo ungacabanga uwedwa, ikakhulukazi uma azikho izimo ezengeziwe. Udinga nje ucabange ngalokho kungaba kuhle kakhulu ukuba achaze uhlobo lomuntu wakho ngandlela-thile ulungise konke, ukuhlela imigomo simonhlalo, uma kunesidingo. Ngeshwa, hhayi wonke umuntu angakwazi beveza isidlaliso sakho siqu ukuze kwaba ungqo esimnandi. abadlali abaningi uhlangabezana inkinga ukuthi ahlale amahora, beveza inqwaba izidlaliso, kodwa zonke izinketho ithunyelwa kudoti, ngoba bengafuni okuthile. Kungenye into - nje ukwenza izincwadi zilandelana, ukudala isidlaliso, nokuningi - beveza izidlaliso enhle angamaduna imidlalo. Futhi uma nikwenza lokho kungaphumeleli - akukho lutho olungalungile, zikhona ezinye izindlela zokuthola isidlaliso omuhle.
Indlela beveza izidlaliso amadoda imidlalo inthanethi? Lena inkinga esiphuthumayo kakhulu abadlali. Ngo iphrojekthi olulodwa Yiqiniso, ungakwazi alobe nohlobo yiliphi igama ukuthi izobe ukuboniswa kuphela kuwe. Lezi izidlaliso kulokho akuphazamisi, ngokungafani kuya project multi-yomsebenzisi, lapho wonke umuntu obona kahle indlela igama lakho, futhi ungenza eziphethweni kakade nje lokhu. Ngakho, udinga sibi nakakhulu indlela kukhethwa isidlaliso for yabadlali abaningi - futhi lokhu kungakusiza amasayithi ezikhethekile. Lapho ungathola iqoqo elikhulu izidlaliso ukuthi sezivele kusungulwe omunye. Ngokuvamile, lezi amaqoqo aqukethe amayunithi abangaphezu kwamakhulu amahlanu, ngakho nakanjani uyokwazi pick out izinto ezizuzisayo. ethile Small Kuyaphawuleka ukuthi isidlaliso efanayo angathola futhi bazikhethele omunye umuntu, kodwa kuyafaneleka: asikho isiqinisekiso ukuthi lokhu ngeke kwenzeke uma beveza isidlaliso sakho siqu. Ngakho ungakwazi ukubuka ngokuphepha amawebhusayithi ezihlekisayo izidlaliso imidlalo amadoda bese ukhetha ukuthi yini oyithandayo.
Akufanele sibakhohlwe mayelana eyodwa ngaphezulu ithuluzi - isidlaliso generator. Lolu uhlelo elincane ungakha ingcikitsi isiteketiso sakho. Ungakhetha uhlobo, kulungiselelwa, futhi ngezinye izikhathi ngisho ngqo umdlalo othize, futhi lolu hlelo ngeke ukhiqize isidlaliso ngawe nemiyalezo, kodwa ngendlela siyafana nesihloko. Ngakho ungathola isidlaliso eliyingqayizivele futhi wokugaklazeka okwakuqabukela imakwe kuphi. Ngokwemvelo, umdlalo futhi, ayikwazi isikhishiwe, njengoba kwenzeka ekuphileni konke.
Ngakho, wakhetha isidlaliso of enye yalezizindlela - futhi manje ungakwazi ukuyisebenzisa imidlalo. Kodwa kukhona enye indlela ezokwenza ukuba ukwazi ukuba ivelele phakathi ukuphumula futhi wenze isidlaliso yakho kancane yasekuqaleni. Ungakwazi ukuhlobisa isidlaliso izinhlamvu yakho ekhethekile ukuze lihlukaniswe nabanye. Ngokwesibonelo, incwadi "a" Ungashintshanisa "inja", kanye nencwadi English "s" - uphawu dollar. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi kutshengiseke isidlaliso ngokwalo kwamanye izinhlamvu ngendlela ephawulekayo.
Yekuchumana mayelana nendlela "CS GO" shintsha izwi
Rome: Ubude neMpi. Aphambe, amaqhinga kanye namathiphu elula
It wabeka indlebe nge umkhuhlane. Okufanele ukwenze kuqala?
Indlela yokufaka i-mousetrap: imiyalelo namathiphu
Ginger sonwele: incazelo kanye ngezigaba